फ्लर्टिमेनिया वेबक्याम प्रसारकहरूका लागि प्राय: सोधिने प्रश्न
म कसरी प्रसारकको रूपमा साइन अप गर्न सक्छु?
हाम्रो च्याट कोठाहरूमा पैसा कमाउनको लागी तपाइँलाई एक विशेष खाताको आवश्यकता छैन। बस प्रसारण, दर्शकहरू एकत्र गर्न र सिक्का प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहोस्।
म एजेन्सीको रूपमा कसरी रेजिस्टर गर्छु?
प्रत्येक प्रसारकका लागि खाताहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई नियमित प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा प्रसारण गर्न दिनुहोस्।
मैले कतिवटा खाताहरू पाउन सक्छु?
एक मात्र। प्रति एकाधिक खाताहरू अनुमति छैन। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं बहुविध खाताहरूको लागि झण्डा लगाउनबाट टाढाको सबै यन्त्रहरूमा मात्र एक मात्र खाता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
के यो एक पेशेवर प्रसारक हुन आवश्यक छ?
मोडलिंग अनुभव हामीसँग प्रसारण गर्न र पैसा कमाउन आवश्यक छैन। मैत्री र आत्मविश्वासी हुनु केवल आवश्यकताहरू हुन्।
के मेरो लुगाहरू लिनु पर्छ?
होईन, हाम्रो भिडियो च्याट सेवा १२++ को दर्शकहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। तपाईंको दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कुनै ईरोटिक सबटेक्स्ट बिना शो दिनुहोस्। फ्लर्टिमानिया च्याट रूलेटमा लोकप्रिय हुन र धेरै पैसा कमाउन केवल तपाईंको दर्शकहरूसँग च्याट गर्नुहोस् र लामो समयको लागि शट नछाड्नुहोस्।
स्ट्रिमहरूमा कुनै नियम वा प्रतिबन्धहरू छन्?
हाम्रा दर्शकहरूले राम्रो प्रकाश संग राम्रो-हेर्ने स्ट्रीमहरू मन पराउँछन्। Flirtymania.live दर्शकहरू 12 वर्ष पुरानो हुन सक्छ, त्यसैले कृपया तपाईंको क्यामेराको समयमा क्यामेरामा राख्नुहोस्।
आफ्ना दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् र मित्र हुनुहोस्।
सार्वजनिक च्याट कोठाहरूमा कामुक स्ट्रीमहरू निषेधित छन्। तपाईंको स्ट्रिम वयस्क खण्डमा सारिएको वा अवरुद्ध गर्न सकिन्छ।
क्यामेरामा सेक्स, भव्य यौन क्रियाकलापहरू (कठोर बीडीएसएम, चिडियाघर, pedophilia), आत्महत्या र लागू औषध प्रयोग प्रचार सख्त रूपमा निषेध गरिएको छ। यी नियमहरूको उल्लङ्घन प्रशासनले तत्काल ब्लकलाई रोक्दछ।
प्रसारकहरू १ 18 वा माथिको हुनुपर्छ। दर्शकहरू १२ वा माथिको हुनुपर्छ।
म कुन भाषा बोल्छु?
यो तपाइँको तत्काल दर्शकमा निर्भर गर्दछ। अंग्रेजीसँग सुरू गर्नुहोस्; यो हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू बीचको सबैभन्दा साधारण भाषा हो। यदि तपाइँ रूचि राख्नु भए पछि तपाईले आफ्नो मूल भाषामा कुनै शब्द वा दुईलाई सिकाउन प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
म किन "आफ्नो हात लहर" चिन्ह देख्दछु? म केहि गलत गर्दैछु?
तपाईं केहि गलत गर्दै हुनुहुन्न। हामी अनौंठो सामग्री भएकोमा जिद्दी गर्दछौं र यो सरल तरंगले सुनिश्चित गर्दछ कि हाम्रा प्रसारकहरूले बट्स, रिप्ले, र अन्य तेस्रो पार्टी रेकर्डि। प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
के यदि मलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो?
हाम्रो प्राविधिक सहयोग टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाइँलाई थप स्पष्ट रूपमा सोध्न सकिन्छ कि तपाईंको प्रसारण बारेमा कुन हो वा तपाईंको उमेर पठाउन आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्न को लागी।
प्रसारकहरूबाट सबै अनुरोधहरू VIP सेवामा हस्तान्तरण हुन्छन् र सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गरिन्छ। अनुरोधहरू तिनीहरूलाई प्राप्त क्रममा ह्यान्डल गरिन्छ तर ढिलाइहरू उच्च कल भोल्युमको समयमा देखा पर्न सक्दछ।
सम्पर्क गर्नुहोस् फ्ल्याटम्यानिया समर्थन
के म केवल लाइभ मोडमा काम गर्न सक्छु?
जब तपाईं च्याटमा हुनुहुन्न तब पैसा बनाउन तपाईंको आफ्नै प्रसारण रेकर्ड गर्नुहोस्। मुख्य मेनुमा रेकर्डिङ स्विच गर्नुहोस्। रेकर्ड गरिएको प्रसारण तपाईंको च्याट कोठामा भेट्टाउन सकिन्छ।
मैले कसरी मेरो स्ट्रीममा दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्छु?
केही ब्रान्ड नयाँ प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउनुहोस् र, महत्त्वपूर्ण रूपमा, तपाइँका दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्ट्रिममा विवरण थप्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई सार्वजनिक च्याट रूममा आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। सबै लोकप्रिय स्ट्रीमहरू स्वचालित रूपमा उच्च स्थानमा छन् र थप दर्शकहरू आकर्षित गर्छन्।
तपाईंको स्ट्रीममा सोशल मिडिया, वेबसाईटहरू, फोरमहरू बढी कमाउनका लागि लिङ्क वितरण गर्नुहोस्।
मैले पैसा कमाउन सुरु गरें?
जब तपाईं पर्याप्त दर्शकहरू स 100्कलन गर्नुहुन्छ (१०० वा अधिक), सशुल्क प्रसारण समारोह स्वचालित रूपमा सक्रिय हुन्छ। सुरुमा, सबै प्रसारणहरू दर्शकहरूको लागि निःशुल्क हो, तर तपाईंले अझै सिक्का प्राप्त गर्नुहुनेछ र दर्शकहरूले तपाईंलाई थप उपहारहरू पठाउन सक्नेछन्।
प्रसारणकर्ताहरूलाई तेस्रो-पक्ष संसाधनहरूको विज्ञापन गर्न, प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्न वा भुक्तान प्रसारणहरूको समयमा तेस्रो-पक्ष भुक्तान विधिहरू प्रयोग गर्न अनुमति छैन।
म कति कमाउन सक्छु?
अधिक दर्शकहरू तपाईंको प्रसारण छ, अधिक तपाईले तिर्नुभयो। नयाँ दर्शकहरू बनाउन नयाँ दर्शकहरू आकर्षित गर्नुहोस्!
निजी कल भुक्तानी गरिएका छन्?
हो! जब तपाइँ अधिक दर्शकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंले प्रसारण र निजी कलहरूको लागि अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै प्रतिबन्धहरू वा लुकेको शुल्क छैन।
सिक्का के हुन्? तिनीहरू के लायक छन्?
सिक्का आन्तरिक मुद्रा वेबसाइट हो। प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूलाई तिर्नु, उपहारहरू खरीद गर्न र भुक्तानी मनपर्नेहरू प्रदान गर्न तिनीहरूलाई खरीद गर्छन्। सिक्किहरुसँग $ 1 देखि 6000 सिक्का निश्चित दर छ। मुद्रा सिक्कामा प्रदर्शन गरिएको छ।
मेरो सिक्का सन्तुलन कहाँ देख्न सक्छु?
तपाईंको खातामा सिक्काहरूको संख्या मुख्य मेन्यू माथि देखाइएको छ। तपाईको च्याट कोठामा गतिविधिको पूर्ण इतिहास फेला पार्न सकिन्छ।
न्यूनतम फिर्ता रकम के हो?
हाल, $ 30 न्यूनतम निकासी रकम हो।
मैले कति पटक पैसा फिर्ता लिन सक्छु?
हामीसँग कति पटक तपाईं पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ त्यसमा हामीसँग कुनै प्रतिबन्ध छैन। तपाईं कुनै पनि समयमा भुक्तानी अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ, एक पटक तपाईं $ 30 को न्यूनतम ब्यालेन्समा पुग्नुभयो।
हटाउने विधिहरू के हो?
यस समयमा, तपाइँ बिटकोइन वालेट वा Yandex.Money प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पैसा फिर्ता लिन कति लामो लाग्छ?
स्थानान्तरण सामान्यतया 2-3 दिन भित्र पुग्छ।
के म प्रयोगकर्तालाई रोक्न सक्छु?
तपाइँ प्रयोगकर्तालाई उनीहरूलाई परेशान गर्नबाट रोक्नको लागि ब्ल्याकलिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि कुनै पनि समय प्रयोगकर्ताहरू अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ।
के म एक निश्चित देशबाट मेरो स्ट्रिम हेर्नबाट रोक्न सक्छु?
हो। सेटिङमा एक वा धेरै देशहरू असक्षम गर्नुहोस्।
के प्रयोगकर्ताले मलाई मनपर्नेहरूमा थप्न सक्छ?
अवश्य। एक पटक प्रयोगकर्ताले तपाईंलाई सदस्यता दिँदा, उनीहरूले तपाईंको प्रसारण प्रसारण प्रत्यक्ष हुँदा सूचना प्राप्त गर्नेछन्। सबै सदस्यहरूले उनीहरूको मनपर्ने प्रसारणहरूलाई विशेष मेनुमा हेर्छन्।
के यो मोबाइल फोनबाट प्रसारण गर्न सम्भव छ?
हो, तपाइँ सबै गर्न आवश्यक छ एन्ड्रोइड वा आईओएस को लागि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
त्यहाँ नि: शुल्क च्याट छ? के यो भुक्तान गरिन्छ?
पूर्वनिर्धारितद्वारा सबै प्रसारणहरू नि: शुल्क छन्। स्ट्रिमको १०० जना दर्शक वा बढी भएको एकचोटि हामी मात्र भुक्तान गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई सोध्छौं।
यदि क्यामेराले काम गर्दैन वा च्याट जमेको छ भने म के गर्नुपर्छ?
पहिले ब्राउजर वा अनुप्रयोग पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। यदि त्यसले हाम्रो प्राविधिक सहयोग टोलीलाई सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दैन भने र मुद्दालाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। सम्भव भएमा स्क्रिनशटहरू संलग्न गर्नुहोस्।
प्रयोगका शर्तहरूगोपनीयता नीतिसमर्थनएक वेबक्याम प्रसारक बन्नुहोस्वेबक्याम प्रसारणकर्ताहरूका लागि FAQसहबद्ध कार्यक्रमसहबद्ध कार्यक्रम साझेदारहरूको लागि सोधिने प्रश्नतपाईंको सामग्री बेच्नुहोस्Creator agreement Affiliate agreement
मित्रहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस्